QALABKA SAXDA AH IYO DARYEELKA EE BARAFKA KU YAAL GOOBTA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Qarsoonaanta beerashada iyo daryeelka ee barafka
Jidka dhexdiisa, beerta ama deyrta waxaad mararka qaarkood arki kartaa duurka hooseeya leh miro cad oo qaabka kubbadaha. Warshad aan caadi ahayn waxaa lagu magacaabaa barafka (Symphoricarpus, Snowfield). Waxay noqon kartaa qayb qurxoon oo qurux badan ee muuqaalka, iyo daryeelka ee uma baahna wax badan oo adag.
Doorashada goob loogu talagalay beeritaanka barafka
Xaaladaha iyo meesha ay degaan ee barafka ma laha shuruudo gaar ah. Waxay ku kori kartaa hooska iyo meelaha qorraxda, waxay u dulqaataa abaarta, waxayna u adkaysataa degaanka magaalooyinka - qiiqa iyo gaasaska. Rizjiyada barafka ayaa awood u leh in ay joojiyaan burburinta jilicsanaanta. Waxay la qabsadaan meelaynta nidaamka xididka geedaha waaweyn, taas oo u oggolaanaysa baadiyaha inay si toos ah ugu koraan iyaga.
Qodobka kaliya ee liddi ku ah dhirta waa qoyaan ciid ah oo xad-dhaaf ah.Sidaa darteed, markaad dooranayso goob degaan ah, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah ku yeelatid aagagga si fiican loo miiray.
Ma taqaanaa? Magacyada Ingiriisiga ee barafka waa "baraf" (baraf baraf ah), "ghostberry" (berriga geedka) iyo "waxberry" (berry).
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo lagu beero caleenta barafka
Qalabka beeritaanka waa in lagu qodaa buro dhulka ah oo xididdada ka mid ah. Waxaa lagu talinayaa in la doorto duurka dhalinyarada ah oo ah 2-4 sano jir. Xaaladda gaadiidka, xididdada waxaa lagu duuduubay warqad qaro weyn ama maro qoyan si looga hortago waxyeello iyo burbur. Haddii xididdadu ay qalalan yihiin, waa lagama maarmaan in lagu daboolo walxo dareere ah oo dhoobo ah iyo biyo ka hor inta aan la beeri.
Si loo abuuro hal shidaal baraf ah, god waa in lagu qodaa qoto dheer iyo dhexdhexaad ah 0.6-0.7 m. Wixii beeritaanka kooxeed, geedku waa in la dhigaa fogaan ah 1-1.5 m dhirta kale, iyo qoto dheer ee daloolka soo degayaa waa inay gaaraan 0.5-0.7 m
Si loo beero xitaa qallalan waxaa lagama maarmaan ah in la adkeeyo xuddunta oo qodo godad ku xajisan khadkaan oo leh qoto dheer oo ah 0.6-0.7 m iyo width of 0.4-0.5 m.
Dheeraad ah waa lagama maarmaan in la bacrimiyo ciidda, haddii ay jirto baahi. Isku dar ah peat, ciid iyo humus (compost) ayaa lagu daraa ciidda dhoobada, ash alwaax iyo superfosphate ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa (600 g iyo 200 g, siday u kala horreeyaan, baadi goob kasta). Inta u dhaxeysa duurka waxaad u baahan tahay inaad ka tagto fogaan ah 0.3-0.5 m. Ka dib markii laga beerto, ciidda waxaa la tamped hoos iyo daboolay isku isku dhafan isku mid ah. 4-5 maalmood ee ugu horreeya, abuurka wuxuu u baahan yahay in maalin kasta la waraabiyo.
Waa muhiim! Snowberry waa geedka malab wanaagsan. Miraha midabkiisu waa mid aan la karin, laakiin xilliyada qaboobaha (shimbiraha) waxay ku quudiyaan abuurka.
Sida loo baadho duurka
Ku waraabinta duurka ee nadiifka qalalan ayaa ka soo baxa xisaabinta qiyaastii 20 litir oo biyo ah (2.5 baaldiyaal) halkii mitir. Waxaa lagula talinayaa inaad tan sameyso fiidkii oo aan marar badanna. Haddii qoyaanka ciidda dabiiciga ahi ku filnaado, waraabinta dheeraadka ah looma baahna. Kadib waraabinta ama roobka waxaa ku haboon in laga qaado haragga iyo xakamaynta ciidda agagaarka baadiyaha.
Sida loo xaaqo
Meelaha barafka lagu daro waxaa ugu fiican gugii hore, ka hor inta aan la gooyin. Waa in lagu dhajiyo maskaxda in burooyinkeeda ubax la abuuro on caleemaha ee sanadka hadda. Ka dib markii gooyo geedku si firfircoon oo si sahlan loo soo celiyo.
Marka gooyo, sameynta taaj, caleemaha u baahan tahay in la soo gaabin by kala bar ama afar meelood hal dherer ah. Geediinka nadaafadda waxaa loola jeedaa in laga saaro laamaha qalalan iyo waxyeello. Manjooyin waa in si joogto ah loo sameeyaa.
Waqti ka dib, geedaha barafka ayaa lumiya muuqaalka muuqaalka: caleemuhu way daciifiyaan oo gaabiyaan, caleemaha iyo ubaxu waxay noqdaan kuwo yaryar. Si aad u cusbooneysiiso baadiyaha hore, oo ku noolaanaya dib u soo kabashada. Haddii baadiyaha gebi ahaanba la gooyaa dhererka 40-60 cm, caleemaha cusub ee xooggan waxay ka soo baxaan burooyinka hurdada ee xagaaga.
Ka dib markii la jarjarey, qaybaha la gooyey ee laamiyada waxaa lagu baaraandegay beerta beerta.
Ma taqaanaa? Waxaa jira 15 nooc oo dabiici ah oo baraf ah (aanad tirin Beelaha), midabka berry ah oo aan noqon karin oo keliya caddaan, laakiin sidoo kale casaan, rabadh iyo xitaa madow (baraf Shiine).
Hababka barafka taranta
Wixii baraf baraf ah waxaad dooran kartaa habka ugu haboon ee naftaada ka socda dhawr ka mid ah kuwa hadda jira.
Buunshuhu wuxuu ballaarin karaa oo ka guuri karaa goobta asalka ah ee asalka, sababtoo ah agagaarka tirooyinka badan ee koritaanka xididka ayaa la sameeyay. Waxaa loo isticmaalaa sidii wax loo beerto. Habkani wuxuu kaloo ka caawiyaa inuu baadiyaha ka ilaaliyo kororka.
Guga hore ama dayrta goor dambe, baraf weyn oo baraf ah ayaa la qodi karaa waxaana loo qaybin karaa qaybo badan. Daryeelka waa in la qaato in qeyb kastaa leeyahay xididada iyo laanta la isku haleyn karo.
Si aad u dhalatid adoo dhajinaya, waa in jeexan loo sameeyo meel u dhow duurka, lafo guluub ah ku daadi, adoo hagaajiya (tusaale ahaan, silig) oo dabool daboolka si aad loola daboolo laanta korkiisa. Waxaa lagula talinayaa in tan la sameeyo guga, iyo xagaaga waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo lakabyada, bacrimiya iyo kabtiisa ciidda ku wareegsan. Ilaa xilliga dayrta, waxay qaadan doontaa xidid, waxaana lagu beddeli karaa meel kale, kala-soocida qaybaha kala duwan ee warshadda muhiimka ah.
Wixii faafin by jarida, guntooda lignified iyo cagaar ayaa loo isticmaalaa. Barafka caleemaha 10-20 cm dheer waa la gooyaa dayrta goor dambe ama jiilaalka hore oo lagu keydiyaa meel qabow ah, dhoobo ciid. In gooyn guga ayaa la googooyaa leh burooyinkeeda dhowr. Caleemaha cagaaran ayaa la gooyaa bilawga xagaaga waxaana la dhigaa biyo kulul oo xididdo.
Gooyn ayaa lagu beeray substrate nafaqo lagu qasi jiray ciid, oo lagu meeleeyay aqalka dhirta lagu koriyo. Xilliga dayrta, dhirta waxaa lagu beeray goobta, waxaana lagu daboolay xilliga qaboobaha.
Nidaamka dheeraadka ah ee abuurista abuurka barafka wuxuu ku bilaabmayaa soo saaridda miraha bislaaday ee miro, dhaqidda iyo qalajinta. Markaas waa in lagu beeray sanduuqyada leh ciidda bacrin ah, rusheeyey ciid xoogaa, ku dabool leh dhalooyinka, prikopat on goobta iyo qoyaan ahaan qoyan. Haddii aad tan sameyso xilliga dayrta, marka caleemaha ugu horreysa waxay soo baxaan guga, taas oo bisha May lagu dhufan karo loona googooyaa dhulka furan.
Waa muhiim! Qaar ka mid ah noocyada barafka (tusaale ahaan, casaan baraf ah Greenpearl Fantasy) waxay u baahan tahay hoy dheeraad ah xilliga jiilaalka.
Sida loo xaliyo cayayaanka suurtagalka ah iyo cudurada barafka
Barafku wuxuu u adkaystaa cudurada iyo cayayaanka, laakiin leh qoyaan ciid ah oo xad-dhaaf ah waxa ay saameeyn ku yeelan kartaa kalluunka casriga ah iyo xayrta maqaarka. Si looga hortago caabuq guga horraantii, duurka ayaa lagu daaweeyaa 3% oo ah isku darka Bordeaux (10 litir oo biyo ah, 300 g oo ah copper sulfate, 400 g oo lime nadiif ah). Wareerka xayrta, daaweynta isku dhafka 0.5% xal soodhaha ah iyo saabuunta dharka lagu dhaqo waxay caawisaa.
Cayayaanka xayawaanku waa bakteeriyaal sharfac leh iyo walxo baraf ah, oo la xakameyn karo iyada oo la adeegsanayo daawooyinka cayayaanka (tusaale, Karbofos). Laamaha cayayaanka ah ayaa la jaraa oo la burburiyaa.
Barafka daaqada ee naqshad beerta
Buunshuhu waa bedel wayn oo ah xayndaab caadi ah. Waxay qabataa hawl ilaalin ah isla mar ahaantaana waxay u egtahay daawada qosolka. Wixii xayndaabka ayaa ka fiican si ay u soo qaado dhirta dhalinyarada. Barafku wuxuu u muuqdaa mid qurux badan oo lagu beeray meel bannaan oo furan (tusaale ahaan, cawska waaweyn), iyo isku dhafka dhirta iska-caabinta - dheer, midab madow ama caleemo, oo leh miraha dhalaalaya (ash buur, viburnum, hawo). Waxay noqon kartaa qayb ka mid ah isku dhafan - beerta ubaxa leh isku dhaf adag oo ubaxyo iyo xoortay leh xilli kala duwan.
Iyada oo ay caawinaad ka heleen duurka si aad ah loo beeray, beerta waxaa loo qaybin karaa aag, iyo sidoo kale abuurista dabiiciga ah ee dhirta kale (tusaale ahaan, asteraha multi-color).
Barafka ugu qurxinta badan ee barafka wuxuu u egyahay xilliga dayrta: Caleemaha oo leh khudaar cagaaran oo ku yaal midab cad ama casaan leh waxay abuuraan jajabyo jilicsan.
Waa muhiim! Beer kooxeed, waxaad isticmaali kartaa isku-dar ah barafka leh barberry iyo spirea, iyo sidoo kale cows oo kala duwan iyo lowska cad-jilicsan.
Iska ilaalinta guryaha ee barafka
Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo barafka loogu talagalay ujeedooyinka daawooyinka leh taxadar, sababtoo ah waa sun, iyo ka kooban kiimikada iyo guryaha ayaa si fiican loo fahmay.
Waxaa la ogyahay in dhirta ay ka kooban yihiin saponins - walxo ka samaysan xumbo, xoqin xuubka xajmiga iyo leh anti-boogaha, duriinka, tonic, tayada sifeyn. Waxay yihiin sunta ah marka ay wax cunaan si xad dhaaf ah oo loo sii daayo dhiigga.
Ujeedooyinka caafimaadka iyo dhaqaalaha, barafka ayaa loo adeegsaday qabiillada Hindida Maraykanka ee Waqooyiga Ameerika. Miraha ayaa u adeegay sidii nadiifiye iyo bogsasho wakiil ah maqaarka (laga soo bilaabo gubid, finan, boogo). Caleemaha la jajabiyey, miraha iyo jilifka sida cadaadis waa daaweyn loogu talagalay dhimista, nabarrada, gubashada iyo dildilaaca maqaarka. Faleebo ee afkoda ayaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo cudurrada caloosha iyo caadada caadada, decoction ee caleemaha qabow, decoction ee xididdada cudurada venereal.
Ma taqaanaa? Snowberry wareegsan, caadi ah Waqooyiga Ameerika, waxaa lagu magacaabaa currant Indian - currant Indian. Warshadu waxay heshay magaceeda labaad "coralberry" (berri dhir ah) midabka miraha.
Laguma talinayo in daawooyinka laga isticmaalo gudaha barafka iyada oo aan la socon kormeer dhaqtar. The baradho waa dhirta jecel ee bannaanka iyo door weyn oo loogu talagalay beeritaanka on ay.